Inkqubo yoLwakhiwo lweMasonics nge-ETABS-Imodyuli 1-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Inkqubo yoLwakhiwo lweMasonics nge-ETABS-Imodyuli 1
Le khosi iqulathe uphuhliso lwethiyori kunye nolusebenzayo lweeNdonga zoLwakhiwo. Yonke into enxulumene nemimiselo iya kucaciswa ngokweenkcukacha: Ummiselo woYilo kunye noKwakhiwa kweZakhiwo zoLwakhiwo lweZakhiwo R-027
Umzekelo omiselwe ngummiselo okhankanywe apha ngasentla uya kuphuhliswa, ngenjongo yokuba umthathi-nxaxheba aqonde nzulu ngefilosofi yomgangatho we-R-027, konke oku okugqibela ngetafile ye-Excel eya kusiwa kulowo uthatha inxaxheba. Ukongeza, ubume be (Ikholamu emfutshane) iya kucaciswa apho siza kubona ukuba le nto isetyenzisiwe kwiDonga loMason kwaye kufuneka iphathwe ngononophelo olukhulu kwiiprojekthi.
Iindlela ezimbini zokwabela iindawo zentsimbi ziya kuchazwa kwesona software sihambele phambili kwintengiso kwi-ETABS 17.0.1 Ukubalwa kwesakhiwo, apho iziphumo zesoftware ziya kutshekishwa ngesandla. Isisombululo sokudityaniswa kwemiqadi edibanisa iiNdonga zoLwakhiwo zoSakhiwo ziya kuthi thaca. Ngazo zonke ezi ngcamango engqondweni, abathathi-nxaxheba baya kuba nakho ukuqala iprojekthi nge-Structural Masonry Methodology.
Iikhonsepthi ezisisiseko kunye neziphambili zokucaciswa kweeProjekthi zoLwakhiwo
Abafundi bezenjineli, iinjineli ezinamava okanye ezingenamava kunye nabayili bezakhiwo
Ikhosi ye-AutoCAD - funda ngokulula
Ikhosi ye-Masonry yoLwakhiwo kunye ne-ETABS-iModyuli yesi-3